YAA UMMATA OROMOO MAAL FURMAANNI ?
Falmataa oromoo Unversity Oromiyaa irraa
Oromo Irrati Yaaki Dalgamuu Guyyuuma guyyan Fula jijiratee Babalata Jira.
Qabeenyi keenya kan dachee keessaas ta'e dachee irraa saamamee dhume.
Beektotni keenya kan Oromiyaa jijjiiruu danda'an kaan ajjeefamanii,kaan immoo lubbuu isaanii baraarfachuuf biyya hambaatti godaananii biyya hormaa misoomsaa jiru.
lammiin oromoo biyya isaa keessatti abbaa biyyummaa dhabee,akka lammii lammaffaatti ilaalamee osoo biyya hambaatti baqatuu dhiyaana... qurxummii galaana diimaa keessaa fi irbaata allaattii ta'e.
Barataan Oromoo mirga barachuu dhabee,Gadaantummaan itti dhaga'amee ol'aantummaan barataa tigiree mirkanaa'ee yoo ol jedhee ija keessa ilaale jimlaadhan university keessaa ari'amaa jira.
Tplf barattoota Oromiyaa irratti karikulamii naannoo biraa irraa adda ta'e yeroo yeroon baasuun barattoota Oromoo hirkattuummaa fi doofummaa bara baraa jalatti kuffiste.
lammii Oromoo biyya isaaf bu'aa buusuu danda'u Abo dha ,Abo'n immoo shororkeessaa dha jechuun seera baasee jimlaan gara mana hidhaatti guuree,manni hidhaa ethiopiaa keessa jiru ilmaan oromoon guute,bakka itti hidhu dhabee biyyoota akka sudaanii fi sumaaliyaa mana hidhaa sadarkaa kadhachuu irra ga'eera.
Saba Oromoo meeshaa hiikkachiisee gosa biroo hidhachiisee duguuggaa sanyii ummata oromoo irratti raawwachaa jira.
Ummata oromoo magaalaa fi baadiyyaa irra jiraatan, kan lafti isaanii daldalaaf ykn qonnaaf mijataa ta'e irraa godaansisee lammii tigiree qubsiisaa jira ,seera investiment law jedhamu tumamee,kan Oromiyaa abbaa lafummaa isaa dhabsiisu fayyadame.
Seera saamichaaf isaaf mijatu tax law kan jedhamu tumatee tax humnaa olii daldaltootaa fi hojjettoota Oromoo irratti shallaguun hiyyummaa bara baraa jalatti kuffise.
Tplf sodaatteetti amma hojii dhabaan Oromiyaa keessa daran heddummannaan kanneen erga eebbifamanii waggaa 3 ol taa'aa turan heddumminaan mindan soosobe dirqin miseensa TPLF goote ramadaa jirti. Kun Nannoo Harargee bahaa, lixaa fi Arsii keessatti.naannoo keessati babalinan gegefama jira, wara Miseensuma diidan garuu amalee hoji akka hin arganee dhorktee jirti.
Akkasumas barattoota kutaa kudhan xumuran saalli isaanii dhiira ta'an maallaqa muraasaan kara Agency gara biyya Arabaa akka deeman godhaa jirti jedhan. Hubadhu! Dur kan kontoraataan biyya arabaa deeman dubara ture, dhiirri kontoraataan deemuu jalqabuun isaa barana. Kunis siyaasa mataa isaa danda'e of keessaa qaba,innis akka dargaggoon Oromoo qabsoo dhiisanii galtuu ta'an gochuu fi malee, Oromoota meeqaaf iscolaarii kennaa jira. Garuu siyaasa kanaan dargaggoo galtuu godhee biyya hambaatti ergee, jaarsolii fi daa'imman qofti Oromiyaa keessa akka jiraatan godhee, umurii bittaa isaa dheereffachuuf
Kanaafu nuti dargaggoonnii maal gochuu qabna? Hanga yoomiitti ajjeefamuun uummata Oromoo miidiyaa Addunyaatiin odeeffama,hanga yoomiitti Barataan Oromoo university tii ari'ama,hanga yoomiitti barataan Oromoo mataa buusee,akka galtuutti ilaalama,hanga yoomiitti qabeenyi keenya saamama. FURMAANNI KEENYA YAA DARGAGGOO OROMOO 1 Ijaaramuu,diina jala kufuu fi sodaachuu dhiisuu.
Unversity Oromiyaa irraa